Global Voices teny Malagasy » Ataon’i Georgia mafy kokoa ny fanasaziana amin’ny fandikan-dalàna · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 12 Mey 2021 4:25 GMT 1	 · Mpanoratra OC Media Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Zeorzia, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
Pikantsary avy amin'ny lahatsarin'ny Voice of America .
Ity tantara ity dia nivoaka voalohany  tao amin'ny tranonkalan'ny OC Media. Nivoaka araka ny fifanarahana fifampizarana votoaty ny endrika naisam-panitsiana kely etoana.
Nankatoavin'ny mpanao lalàna Zeorziana tamin'ny herinandro ny andiana sazy mafy amin'ny fanitsakitsahana ara-panjakana izay lazain'ny vondrona mpandala ny zon'olombelona ho mety hisy fiantraikany amin'ny fahalalaham-pitenenana sy ny zo hamory olona am-pilaminana.
Tamin'ny 29 avrily, nankatoavin ‘ny parlemanta anjakazakan'ny “Nofy Zeorziana”, tao anatin'ny andiam-potoana fihainoana novitaina haingana, ny fanitsiana ny Fehezan-dalàna momba ny fandikan-dalàna izay mampiditra fanasaziana mafy kokoa amin'ny fanaovana asan-jiolahimboto (Andininy 166) sy ny tsy fankatoavana ny polisy (Andininy 173).
Nataon'ny amboaran-dalàna ho avo telo heny ny onitra (kely indrindra) amin'ny famerenana matetika ny asan-jiolahimboto (hooliganism) hahatratra ₾1500 (440 USD) ary avo roa heny ny onitra ambony indrindra hahatratra ₾2000 (580 USD). Ankoatra ny onitra, mety hohazonina ara-panjakana (alohan'ny fotoam-pitsarana) ao anatin'ny dimy andro farafahakeliny ary hatramin'ny 15 andro no lava indrindra koa ireo nanao fandikan-dalàna.
Nataon'ny mpanao lalàna ho mafimafy kokoa ihany koa ny fanasaziana amin'ny tsy fanantanterahana ny baikon'ny manampahefana mpampihatra lalàna iray, amin'ny fampakarana ny olona avy amin'ny ₾1000-₾4000 (290-1,200 USD) ka ho lasa ₾3500-₾4500 (1000-1300 USD) ary ny fihazonana ara-panjakana ho hatramin'ny fito andro (mbola hijanona 15 andro ihany ny fihazonana lava indrindra).
Fanampin'izany, nitarin'ny Parlemanta ihany koa avy amin'ny 24 ora ho lasa 48 ora ny fihazonana ara-panjakana amin'izay antony rehetra [fandikan-dalàna] (Article 247).
Naneho ny ahiahiny amin'izao fanitsiana izay amin'izay fiantraikany miiba amin'ny fahafaha-mivory am-pilaminana izao ireo vondrona mpivovò [Watchdog], ao anatin'izany ny Transparency International — Georgia, ny Fikambanan'ny Tanora Mpisolovava Zeorziana (GYLA), ary ny Ivotoeram-Pikarohana Demaokrasia (DRI), satria ireo lalàna kinendrin'ny fanitsiana dia ireo fampiasan'ny polisy hitazonana ireo mpandray anjara fihetsiketsehana an-dalambe anti-governemanta.
Masoivohon'i Etazonia: ‘Diso fanantenana lalina’
Nosoritan'i mpitsikera fa manasarotra ny fanaraha-maso ataon'ny vahoaka amin'ny fizotra[m-pitsarana] ny fijerena ny drafi-dalàna kimaimaika, sady mampidi-doza ny hita ho fifanatonan'ny antoko mitondra “Nofinofy Zeorziana” sy ny fanoherana ao amin'ny firenena.
Tafalatsaka tao anaty krizy politika i Georgia hatramin'ny Oktobra 2020, rehefa nanohitra ny voka-pifidianana parlemantera nahazoan'ny antoko mitondra amin'izao fotoana izao “Nofinofy Zeorziana” fandresena ireo vondrona ao amin'ny fanoherana. Nisy ny fifanarahana vita tamin'ny volana avrily taorian'ny fanelanelanana nataon'i Etazonia sy ny Vondrona Eoropeana.
Nitatitra ny RFERL :
Mametraka ny fifanarahana fa hisy ny fifidianana mialoha ny fotoana hotanterahana amin'ny taona 2022 raha mahazo latsaky ny 43 isanjato ny Nofinofy Zeorziana amin'ny fifidianana isa-toerana [faritra]. Napetrany ihany koa ny fitsipika amin'ny fifampizaram-pahefana ao amin'ny parlemantera, navoitra ny fanitsiana ny rafi-pitsarana, ary nanaovany fanoloran-kevitra ny fanitsiana ny Vaomieram-Pifidianana Foibe.
Tao amin'ny fanambaràna iray nivoaka fotoana fohy taorian'ny nandaniana ny fanitsiana, naneho  ny “fahadisoam-panantenana lalina” amin'ny fampandanian'ny “Nofinofy Zeorziana” haingana dia haingana ny andian-dalàna ny Masoivohon'i Etazonia ao Georgia, milaza izany ho “tsy voatery ilaina sy tsy manampy.”
“Ny tsy fisian'ny fanontaniana matotra ny hevitry ny antoko mpanohitra, ny firaisamonim-pirenena, ary ireo mpandray anjara hafa no mampanangana ny fanontaniana amin'ny tanjon'ny fanitsiana,” hoy ny fivakin'ny fanambaràna.
Nosoritan'ny masoivohon'i Etazonia fa “nijabaka” ny Nofinofy Zeorziana tsy naka dingana iraisan'ny maro kokoa [mampiaty kokoa] taorian'ny fifanarahana.
Ho setrin'izany tsikera izany, nailiky ny mpikambana parlemanteran'ny [MP] Nofinofy Zeorziana Dimitri Samkharadze amin'ireo vondrona fanoherana tsy niraharaha ny fotoana hifanazavana momba ny lalàna ny tsy fisian'ny adihevitra tamin'izany.
Raha mitsikera ny Nofinofy Zeorziana tamin'ity hetsika farany ity, dia tsy nitsitsy fitenenana ny vondrona fanoherana ao amin'ny parlemanta tamin'ny fahanginany “mahatankina” tamin'ity raharaha ity ny vondrona mpikatroka maro, ao anatin'izany ny Movement for Georgia sy ny Shetsvale (Miova!), izay matetika no manatontosa fihetsiketsehana anti-governemanta.
Tamin'ny 27 avrily, tao anaty fanamby handresy krizy, nanomboka handray anjara tamin'ny asa parlemantera ny MPs avy amin'ny Strategy Aghmashenebeli, Lelo, ny Antoko Repoblikana, Girchi — Foibe Ara-Politika Vaovao, ary Girchi — More Freedom. Na izany aza, noferan-dry zareo ny asan-dry zareo ho amin'ny lalàm-pamotsoran-keloka izay antenaina hanafahana an'i Nika Melia, mpitarika ny vondrona fanoherana lehibe indrindra United National Movement, izay any am-ponja hatramin'ny 23 febroary  amin'ny vesatra mifandraika amin'ny fihetsiketsehana anti-governemanta  izay nanenika ny firenena tao anatin'ny volana vitsivitsy izao.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2021/05/12/152576/
 Nitatitra ny RFERL: https://www.rferl.org/a/eu-mediates-to-end-georgia-political-crisis/31212149.html
 any am-ponja hatramin'ny 23 febroary: https://www.voanews.com/europe/georgian-authorities-arrest-opposition-leader-melia
 fihetsiketsehana anti-governemanta: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/02/georgia-police-storm-opposition-headquarters-to-arrest-leader-nika-melia/